Imithetho Yensangu Yezokwelapha yaseKentucky - Insangu yezokwelapha e-KY
Imithetho Yensangu Yezokwelapha yaseKentucky
Ukusetshenziswa Kwezomthetho kanye Namalayisense eKentucky kungenzeka uza ngo-2021!
Ngokokuqala ngqá ngo-2020 - iKentucky ivote futhi yadlulisa ukwenziwa kwayo ngokusemthethweni kwe-Medical Cannabis! Imithetho yaseKentucky Medical Cannabis izoshintsha maduzane ngoba isishayamthetho sombuso wayo savotela ama-65-30 ukwenza ngokusemthethweni insangu yezokwelapha yabantu baseKentucky. Kungekudala kungaba ngumthetho futhi kuvumele iziguli ukuthi zithole umuthi we-cannabis osemthethweni kanye nabanye abantu ukugwema ukuboshwa okungadingekile imiphakathi evimbelayo eqhubeka nokugcina.
IKentucky Marijuana Bill HB 136
Akunasiqiniseko okwamanje, kepha indlu yaseKentucky ivume umthethosivivinywa wokugunyazwa kwensangu kwezokwelapha - owashintsha igama lawo laba yi-cannabis phakathi kwezinye izinto.
Imithetho yaseKentucky Medical Cannabis iyavela, okusho ukuthi iKentucky kungekudala ingajoyina amazwe asemthethweni we-cannabis ezigulini zayo zezokwelapha! Ngokushesha, mhlawumbe ungathola i- ilayisense yokuqhuba ibhizinisi lakho le-cannabis lezokwelapha eKentucky.
IKentucky Isadinga Ukubhalisa Intsangu Yezokwelapha ngo-2021
Ufuna iKentucky Imininingwane Yasemkhayeni - Chofoza Lapha.
I-Kentucky HB 136:Dala okusha okuhlukahlukene Imithetho Yensangu Yezokwelapha yaseKentucky to chaza amagama; ukukhulula uhlelo lwensangu okwelapha kusuka ezinhlinzekweni ezikhona emthethweni weKentucky; ukudinga uMnyango for Alcoholic Beverage and Cannabis Control ukuze uqalise futhi ulawule uhlelo lohlelo lwensangu eKentucky; ukusungula isigaba seMedical Marijuana ngaphakathi koMnyango We-Alcoholic Beverage and Cannabis Control; ukusungula imikhawulo ngokutholakala nensangu yokwelapha ngeziguli ezifanelekayo, ukuhambela iziguli, kanye nabanakekeli abaqokiwe; ukusungula ukuvikeleka okuthile kubanikazi bamakhadi; ukusungula ukuvikeleka kwabasebenzi abasebenza ngempumelelo; ukuhlinzekela i ukugunyazwa kwabasebenza ngamabhodi welayisense wombuso ukukhipha izitifiketi ezibhaliwe zokusebenzisa insangu yokwelapha; ukusungula ukuvikela kobungcweti kwabameli; ukwenqabela ukutholakala nokusetshenziswa kwensangu okwelashwa ngebhasi lesikole, ngezizathu zanoma yisiphi isikole sabaqalayo noma samabanga aphansi, endaweni yokulungisa isimo, iKentucky Medical Cannabis Legalization, noma iyiphi impahla kahulumeni wobumbano, noma ngenkathi usebenza imoto; ukwenqabela ukubhema insangu okwelapha; ukuvumela umqashi ukuthi anqande ukuphathwa kanye nokusetshenziswa kwensangu okwelapha yisisebenzi;
Umthetho waseKentucky Medical Marijuana
Umthetho omusha wensangu wezokwelapha waseKentucky uzodinga ukuthi umnyango usebenzise futhi usebenzise uhlelo lwekhadi lokuhlonza;
ukusungula izidingo zamakhadi wokuhlonza irejista; ukusungula imali ekhombisa ikhadi lokubhaliswa; ukucela umnyango ukuthi usebenzise uhlelo lokuthola ilayisense lesikhashana;
ukusungula izidingo zesicelo sekhadi lokukhonjwa kobhaliso;
ukusungula lapho umnyango unganqaba khona isicelo sekhadi lokuzazisa; ukusungula izibopho ezithile kubanikazi bamakhadi; ukusungula lapho ikhadi lokuhlonza irejista lingachithwa;
ukusungula izigaba ezahlukahlukene zamalayisense ebhizinisi;
ukusungula ukudalwa kwamalayisense webhizinisi le-cannabis; ukudinga imininingwane ethile ukuthi ifakwe esicelweni selayisense lebhizinisi le-cannabis;
ukusungula lapho umnyango unganqaba khona isicelo selayisense lebhizinisi le-cannabis leKentucky Medical Cannabis Laws.
ukwenqabela udokotela ukuthi abe yilungu lebhodi noma umphathi omkhulu webhizinisi le-cannabis; ukunqabela ubunikazi bezindawo ezithile zamabhizinisi e-cannabis; futhi
ukumisa imithetho yokuthengisa kwasendaweni.
ISIQONDISO ESIQALILE: Ungayivula Kanjani Dispensary ye-Cannabis
Ufuna ukuvula ibhizinisi le-cannabis
IKentucky May Ingabhalisa ngokusemthethweni Insangu Yezokwelapha
Imithetho ye-Kentann Medical Cannabis - Ngesonto eledlule, ikomidi laseKentucky State House laphasisa umthethosivivinywa wokugunyaza insangu yezokwelapha, umthethosivivinywa, I-HB 136, inesekwa elibalulekile embusweni, futhi inethuba elihle lokuba ngumthetho. Uhlobo olusanda kuphuma ekomitini leNdlu limi lapho 116 amakhasi,. Kuyamangaza ukuthi lokhu kufushane kakhulu kune-Illinois Cannabis Regulation and tax Act, engena amakhasi cishe angama-600.
I-HB 136 idala uhlelo lokuhlinzeka ngamalayisense we "Ibhizinisi le-cannabis" izinkampani, kuhambisana nomkhuba wamanje wezwe obhekisela ku- “cannabis” esikhundleni se- “insangu.” Umthethosivivinywa ushiya imininingwane eminingi yamalayisense emithethweni yokuphatha yesikhathi esizayo, cishe efana namakhasi acishe abe ngu-200 emithethonqubo "ephuthumayo" yelayisense ye-cannabis e-Illinois.
Uhlelo olugcwele lwamalayisense lwenza izinhlobo ezinhlanu zamalayisense webhizinisi le-cannabis ngaphansi kweMithetho emisha yaseKentucky Medical Cannabis, ebhekene nezimali ezihlukile kanye nezidingo. Ngezansi, sibheka ezinye zezimfuneko eziphezulu zolayini bamalayisense ehlukene webhizinisi le-cannabis.
I-KENTUCKY MEDICAL MARIJUANA LAW TEXT & PDF (HB 136)
Umthethosivivinywa uchaza "umlimi" kanjena:
“Umlimi” kushiwo ibhizinisi elinikwe ilayisensi ngaphansi kwalesi sahluko elima, livune, futhi lilethe impahla eluhlaza isetshenziswe komunye umlimi, umhlinzeki, umprosesa, umkhiqizi, noma indawo yokuthobela ukuphepha;
Abalimi bemikhawulo empeleni banomkhawulo ekukhuliseni izinto ezingavuthiwe. Isigaba 21 sikhawulela imisebenzi yabo ngalendlela elandelayo:
Ukutholwa, ukuba nakho, ukutshala, ukutshala, ukukhulisa, ukuvuna, ukukha noma ukugcina imbewu ye-cannabis, izithombo, izitshalo, noma izinto zokutshala ezingavuthiwe;
Ukuhambisa, ukuhambisa, ukudlulisa, ukuphakela, ukuthengisa, noma ukuthengisa izinto zezitshalo ezingavuthiwe noma okuhlobene nakho kwamanye amabhizinisi anelayisense e-cannabis kuhulumeni. noma
Ukuthengisa imbewu ye-cannabis noma izithombo ezinhlwini ezifanayo ezilayisensiwe ukuhlakulela insangu kulesi simo noma kunoma yikuphi okunye ukubusa
Abalimi kuphela kwezindawo ezinamalayisense ezinama "tiers" ahlukile, ezithinta izindleko zelayisense. Lokhu kufana nolunye ulayisense we-cannabis kwezinye izifundazwe ezisemthethweni. Kukhona abakhiqizi beTier I, Tier II, Tier II, neTier IV, ngokususelwa kubukhulu bezindawo zabo zokulima:
I-Tier I umlimi- ama-2,500 XNUMX wamamitha-skwele noma ngaphansi;
Isilinganiso - izinyawo eziyizinkulungwane eziyi-10,000 noma ngaphansi;
I-Tier III- 25,000 yamamitha-skwele noma ngaphansi;
Tier IV- 50,000 amamitha skwele noma ngaphansi.
Isimo kumele sivume okungenani Amalayisense abalimi abayi-15 kungakapheli nonyaka ngemuva kokuqala kokusebenza komthethosivivinywa.
Okokugcina, abalimi (kanye nabakhiqizi kanye nabaprosesa) bangaphansi sína izintela. Isigaba 33 sikhipha intela yendawo 12% kumaresidi amakhulu womlimi.
KENTUCKY CanNABIS ISIVIVINYO SOKUFUNDA
Umthethosivivinywa uchaza "i-dispensary" kanjena:
“I-Dispensary” kusho ibhizinisi elinelayisensi ngaphansi kwalesi sahluko elithola, liphethe, lihambise, lidlulise, lithumele, lithengise, liphakele, noma likhiphe insangu engu-16 kubanikazi bamakhadi;
Ukunikezwa kwamalayisense ama-dispensaries kuyindlela enhle ukwedlula ukulayisensa kwabalimi. Umthethosivivinywa empeleni udinga ukuthi izinkokhelo zihambisane nosokhemisi. Isigaba 22 sinikeza:
Kudingeka i-dispensary ukusungula kanye nokugcina isivumelwano sokusebenzisana esiyishumi, njengoba kuchazwe eSigabeni 10 salo mthetho, nosokhemisi ogunyazwe yi-Kentucky Board of Pharmacy ukwenza isivumelwano sokusebenzisana nabayi-10 i-dispensary
Isimo kumele sivume okungenani Amalayisense angama-25 okuhambisa imali kungakapheli unyaka lowo mthetho oqala ukusebenza. Lo mthethosivivinywa futhi ufuna ukuthi kuvunyelwe okungenani i-dispensary eyodwa esifundeni ngasinye “salezifunda” zentuthuko. Empeleni, kufanele bahlakazeke ngokwendawo ukumboza umbuso.
Ngenhlanhla, izinkampani ezihlinzekwayo azikhokhelwa intela enkulu yokutshala abakhiqizi, amaprosesa, kanye nabakhiqizi.
ILAYENSI YOKUFUNDA KENTUCKY CanNABIS
Umthethosivivinywa uchaza "iprosesa" kanjena:
“Iprosesa” kusho ibhizinisi elinikwe ilayisense ngaphansi kwalesi sahluko elithola impahla engavuthiwe kumlimi ukuze kulungiswe, kusikwe, kuhlangane, kuhlanganiswe, kwenziwe, noma kuguqulwe okunye okokusebenza okutshalwayo okungaphekiwe, kanye nemikhiqizo yephakeji equkethe noma ethathwe entweni eluhlaza engatshaliwe iyathengiswa emtholampilo onamalayisense. ”
Ama-processors avunyelwe ukwenza izinto ezithile ezibekwe kusigaba 23:
(a) Ukuthola noma ukuthenga izinto zokutshala ezingavuthiwe kumlimi, iprosesa, noma umkhiqizi kulelizwe;
(b) Ukunikeza amandla, ukucubungula, ukulungisa, ukukhiqiza, ukusebenzisa, ukuhlanganisa, ukulungiselela, noma ukupakisha i-cannabis yokwelapha;
(c) Ukuhambisa, ukuhambisa, ukuhambisa, noma ukuthengisa insangu yokomzimba nokunye okuhlobene nakho okuya kwamanye amabhizinisi we-cannabis akule mbuso; noma
(d) Ukuthengisa imbewu ye-cannabis noma izithombo ezinhlakweni ezifanayo ezilayisensiwe ukuhlakulela insangu kulesisifundazwe noma kunoma iyiphi enye indawo.
Lo mthethosivivinywa ufuna ukuthi okungenani abahlaziyi abahlanu (5) bathole amalayisense kungakapheli unyaka owodwa wokuhambisa. Ama-processor angaphansi kwentela efanayo yokuthola i-12% yokuthola intela njengabalimi.
I-KENTUCKY CanNABIS PRODUCER LICENSE
Lo mthethosivivinywa udala ilayisense “yabakhiqizi”, abahlangene abahlanganisi nabasebenza ngokuyikho. Ngokuqondile, achazwe esigabeni 1 ngokuthi:
“Umkhiqizi” kusho ibhizinisi elinelayisensi ngaphansi kwalesi sahluko elivunyelwe ukusebenza njenge-17 futhi lenze imisebenzi evunyelwe yomlimi neprosesa eyi-18.
Ngaphansi kwesigaba 24, abakhiqizi bavunyelwe, ukuthi:
(a) Ukuthola, ukuthwala, ukutshala, ukutshala, ukukhulisa, ukuvuna, ukugunda, noma ukugcina imbewu ye-cannabis, izithombo, izitshalo, noma izinto zokutshala ezingavuthiwe;
(b) ukuletha, ukuhambisa, ukudlulisa, ukuphakela, noma ukuthengisa impahla eluhlaza yezitshalo, imikhiqizo ye-cannabis yokwelapha, noma izimpahla ezihlobene kwamanye amabhizinisi e-cannabis anamalayisense kulesi sifundazwe;
(c) Ukuthengisa imbewu noma izithombo ze-cannabis kuzinhlangano ezifanayo ezinelayisense lokutshala insangu kulesi sifundazwe noma kunoma iyiphi enye indawo;
(d) Ukuthola noma ukuthenga izinto zezitshalo ezingavuthiwe kumlimi okule ndawo; noma
(e) Ukuphatha, ukucubungula, ukulungisa, ukukhiqiza, ukuphatha, ukuxuba, ukulungisa noma ukupakisha insangu yezokwelapha;
Ungakapheli unyaka owodwa lo mthetho oqala ukusebenza, umbuso kumele ukhiphe okungenani amalayisense amathathu abakhiqizi abathathu (3). Abakhiqizi baphinde babhekelwe intela yomkhawulo.
ILAYISENSI YOKUPHELELWA KOKUPHELELWA KOKUPHEPHA KOKUPHEPHA KENTUCKY MARIJUANA
Isikhungo Sokuphepha seCannabis Security sinelayisensi ngaphansi komthetho senza enye yezinsizakalo ezimbili:
(a) Ukuhlola i-cannabis yokwelapha ekhiqizwe ibhizinisi le-cannabis elinelayisensi ngaphansi kwalesi sahluko; noma
(b) Abanikazi bamakhadi okuqeqesha nabamele amabhizinisi e-cannabis;
Imisebenzi elandelayo ivunyelwe ngaphansi kwesigaba 25:
(1) Ukuthola noma ukuba ne-cannabis yokwelapha etholakala kubanikazi bamakhadi noma kumabhizinisi angama-26 e-cannabis akule mbuso;
(2) Ukubuyisela i-cannabis yokwelapha kubanikazi bamakhadi noma kumabhizinisi we-cannabis akule mbuso;
(3) Ukuhambisa i-cannabis yokwelapha ekhiqizwe ngamabhizinisi e-cannabis kulesi simo;
(4) Ukukhiqizwa noma ukuthengiswa kwezinto zokufunda ezivunyiwe ezihlobene nokusetshenziswa kwe-cannabis yokwelapha;
(5) Ukukhiqizwa, ukuthengiswa, noma ukuhanjiswa kwemishini noma okokusebenza ngaphandle kwensangu yezokwelapha, kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe kumathuluzi elebhu nezinto zokupakisha ezisetshenziswa ngamabhizinisi e-cannabis nabanikazi bamakhadi, kubanikazi bamakhadi noma amabhizinisi e-cannabis anikezwe ilayisensi ngaphansi kwalesi sahluko;
(6) Ukuhlolwa kwensangu yokwelapha ekhiqizwe kulo mbuso, kufaka phakathi ukuhlolwa kokuqukethwe kwe-cannabinoid, izibulala-zinambuzane, isikhunta, ukungcola, i-vitamin E acetate, nezinye izithasiselo ezinqatshelwe;
(7) Ukuqeqesha abanikazi bamakhadi nabasebenzeli be-cannabis. Ukuqeqeshwa kungafaka kepha akudingeki kukhawulelwe ku:
(a) Ukutshala okuphephile futhi okusebenzayo, ukuvuna, ukupakisha, ukulebula nokusabalalisa ama-cannabis okwelapha;
(b) Izinqubo zokuziphendulela zezokuphepha nokusungula; futhi
(c) Okutholakele ocwaningweni kwesayensi nokwelashwa okuhambisana nokwamanje okuhlobene nokusetshenziswa kwezokwelapha okwenziwa nge-cannabis;
(8) Ukuthola isinxephezelo sezenzo ezivunyelwe ngaphansi kwalesi sigaba; futhi
(9) Ukuzibandakanya kunoma imiphi imisebenzi yebhizinisi engahlobene ne-cannabis engavinjelwe noma ivinjelwe umthetho wezwe.
Ngokungafani namanye amalayisense, umbuso awudingekile ukuthi ukhiphe inani elincane lamalayisense okuphepha kokuphepha kwe-cannabis.
Kunokunye okuvelele okumbalwa kumthethosivivinywa ozothinta kakhulu imakethe yezokwelapha e-cannabis eKentucky:
Umkhiqizi onamalayisense angasebenza kuphela (1) indawo yokulima neyodwa (1) indawo yokusebenza, yize zingaba sezindaweni ezahlukahlukene;
Izimali zokuvuselelwa kwelayisense zincike kumaphesenti amarisidi amakhulu:
Uma amarisidi aphelele angaphansi kwama- $ 2,000,000, inkokhelo ingu-1% wamarisidi amakhulu + $ 500;
Uma amarisidi amakhulu aphakathi kwama- $ 2,000,000 kuya ku- $ 8,000,000, inkokhelo ingu-1.5% wamarisidi amakhulu + ama- $ 2,000;
Uma amarisidi amakhulu angaphezu kwama- $ 8,000,000, inkokhelo ingu-2% wamarisidi amakhulu + $ 4,000.
Uma amarisidi angaphansi kwama- $ 2,000,000 womuntu ngonyaka owedlule, imali engu- $ 500 kanye ne-1% yamarisidi amakhulu;
UMnyango ungayenqaba ilayisense yisiphi isizathu "Ekusebenziseni ukuqonda okuhle", kufaka phakathi:
Isikhulu esikhulu sitholwe sinecala lokwehluleka ukwenza amacala athile;
Isikhungo asihambisani nemikhawulo yendawo;
Isikhungo asiwanelisi umthetho wokuphepha, wokubheka noma wokugcina amarekhodi.
BHEKA IKUSASA LOKUPHAKATHI KENTUCKY MARIJUANA
Lo mthethosivivinywa nakanjani uzoshintsha njengoba usebenza ngendlela yenqubo yomthetho eFrankfort. Kodwa-ke, njengoba kumi manje, i-HB 136 ibukeka icishe ifane nohulumeni bezokwelapha kwezinye izifundazwe. Irabha lizoshaya umgwaqo impela uma imibuso ikhipha imigomo yenqubo ephelele yokufaka isicelo. I-Kentucky ibukeka ikulungele ukujoyina ezinye izifundazwe eziningi eziye ekugcineni zamukela izinzuzo zezokwelapha ze-cannabis.
Umthetho waseKentucky Medical Cannabis
Ngenhloso Yezigaba 1 kuya ku-30 ​​zalo mthetho, ngaphandle uma umongo ngenye indlela udinga:
6 (1) "Ubudlelwano phakathi kwabasebenza neziguli zeBona fide" kusho ukwelashwa noma ukubonisana
7 ubudlelwano, phakathi nesikhathi lapho udokotela:
(A) Uqedile ukuhlolwa kokuqala komuntu kanye nokuhlolwa kwe
Umlando wezokwelapha wesiguli we-9 nesimo sezokwelapha samanje;
(B) Uxhumane nesiguli maqondana nokwelashwa okungenzeka futhi
Izakhiwo eziyi-11 zokuhlobisa i-cannabis yokwelapha;
(C) Uxwayise isiguli ngobungozi obukhona kanye nemiphumela emibi ehambisana nayo
Ukusetshenziswa kwe-cannabis yokwelapha kufaka phakathi ukusebenzisana okungenzeka phakathi I-Kentucky Medical Cannabis Legalization
14 i-cannabis yokwelapha nanoma yisiphi esinye isidakamizwa noma umuthi isiguli esiyiso
15 ukuthatha ngaleso sikhathi; futhi
(D) Usungule ukulindela ukuthi azonikeza ukunakekelwa kokulandela futhi
Ukuphathwa kwe-17 esigulini;
18 (2) "Ibhizinisi le-Cannabis" lisho umlimi, i-dispensary, iprosesa, umkhiqizi noma a
Indawo yokuthobela ukuphepha enelayisense ngaphansi kwalesi sahluko;
(20) "umenzeli webhizinisi le-Cannabis" kusho umphathi oyinhloko, ilungu lebhodi, umsebenzi,
Amavolontiya angama-21, noma umenzeli webhizinisi le-cannabis;
22 (4) “Umnikazi wekhadi” kusho:
23 (a) Isiguli esiqeqeshiwe esibhalisiwe, umnakekeli oqokiwe, noma ovakashele ofanelekile
Isiguli esingu-24 esifake isicelo, sathola, futhi sine-registry esemthethweni
Amakhadi angama-25 wokuhlonza akhishwe ngumnyango njengoba kufunwa yilesi sahluko; noma
(B) Isiguli esivakashelayo esithole futhi esine-registry esemthethweni
Ikhadi lokuhlonza, noma okulingana nalo, elikhishwe ngokuhambisana nemithetho ye
IKHophi ELINGAZIMI 20 RS HB 136 / GA Ikhasi 2 kwangu-118 HB013610.100 - 366 - IKentucky Medical Cannabis Legalisation
1 omunye umbuso, isifunda, insimu, i-Commonwealth, ukutholakala kwe-ins
I-United States, noma izwe eliqashelwa yi-United States evumela ukuthi
Umuntu o-3 ongasebenzisa i-cannabis ngezinjongo zokwelapha endaweni yomthetho we
5 (5) “Umlimi” kusho ibhizinisi elinelayisensi ngaphansi kwalesi sahluko elima, livune,
6 futhi iletha izinto ezihlanzekile zezitshalo komunye umlimi, we-dispensary, processor,
Umkhiqizi ongu-7, noma indawo yokuhambisana nokuphepha;
8 (6) "Umenzeli womlimi" kusho umphathi oyinhloko, ilungu lebhodi, umsebenzi,
9 amavolontiya, noma umenzeli womlimi;
10 (7) “uMnyango” kusho uMnyango Wezempilo Yomphakathi njengoba wasungulwa e-KRS
12 (8) “Umnakekeli oqokiwe” kusho umuntu obhalise kanjalo kwi
13 umnyango njengoba ufunwa yilesi sahluko;
14 (9) “I-Dispensary” kusho ibhizinisi elinelayisensi ngaphansi kwalesi sahluko elithola,
Unempahla engu-15 onayo, okhulula, odlulisayo, owezokuthutha, owokuthengisa, owokuthenga noma owokwelapha
Ama-cannabis kubanikazi bamakhadi;
17 (10) “Umenzeli Wenkokhelo” kusho umphathi oyinhloko, ilungu lebhodi, umsebenzi,
18 ivolontiya, noma i-ejenti ye-dispensary;
19 (11) “Ukungafaneleki kwecala lokwephula umthetho” kusho:
20 (a) Icala lokukhipha ubuhlakani obungahlukanisa umuntu njengecala elinobudlova ngaphansi
21 KRS 439.3401; noma
(B) Ukwephulwa komthetho wezwe noma wezinto ezihlanganisiwe ezihlanganisiwe
23 njengomuntu ohlonishwayo endaweni lapho umuntu alahlwa yicala khona, ngaphandle kwalokhu:
24 1. Icala isigwebo salo, kufaka phakathi noma iliphi igama lokuqulwa kwecala,
Ukuboshwa, noma ukukhishwa okugadiwe, kwaqedwa kwaba mahlanu (25) noma ngaphezulu
Iminyaka engama-26 ngaphambili; noma 27 2. Icala elalihlanganisa nokuziphatha okwenziwe ngalo Izigaba 1 kuya ku-30 ​​zalokhu
Imithetho ye-Kentann Medical Cannabis Laws-ngaphezulu ekhasini elilandelayo
I-1 isenzo kungenzeka ivimbele ukugwetshwa, kepha indlela yokuziphatha
2 kwenzeka ngaphambi kokubekwa kwezigaba 1 kuya ku-30 ​​zalo mthetho noma
3 oshushiswe yigunya ngaphandle kweCommonwealth of
(5) "Indawo ebiyelwe, ekhiyiwe" kushiwo indawo ekhulayo yasendlini njengegumbi,
6 abamba ukushisa, isakhiwo, noma enye indawo ebiyelwe yangaphakathi egcinwe futhi
7 isebenza ngumlimi noma umlimi futhi ifakwe izingidi nokunye ukuphepha
Amadivayisi ayi-8 avumela ukufinyelela kuphela ngama-ejenti womlimi noma umlimi, njengoba
9 efunwa ngumnyango;
10 (13) “Amarisidi ayonke” kusho wonke amanani atholwe ngemali, amakhredithi, impahla, noma okunye
11 imali ebiza noma ngabe yiluphi uhlobo, ngebhizinisi le-cannabis;
(12) “Indawo yokukhula” isho into efanayo nendawo evaliwe, ekhiyiwe;
13 (15) "Insangu" isho okufanayo nokuchazwe ku-KRS 218A.010;
14 (16) "Insangu yokwelapha" isho insangu njengoba kuchaziwe ku-KRS 218A.010 lapho
Kutshaliwe, kuvuniwe, kusetshenzwe, kukhiqizwe, kuhanjiswe, kusatshalaliswa, kusatshalaliswa,
16 kuthengisiwe, kunobunikazi, noma kusetshenziswe ngokuya Ngezigaba 1 kuya ku-30 ​​zalo mthetho. Isikhathi
17 "insangu yokwelapha" ifaka phakathi imikhiqizo yokwelapha insangu kanye nesitshalo esiluhlaza izinto eziyi-18;
19 (17) “Izinsiza zokwelapha ze-cannabis” zisho noma imuphi umshini, umkhiqizo, noma into
20 noma yiluphi uhlobo olusetshenziswayo, oluhloselwe ukusetshenziswa, noma olwenzelwe ukusetshenziswa ukulungisa,
21 ukugcina, ukusebenzisa, noma ukudla i-cannabis yokwelapha ngokuya ngezigaba 1
22 kuye ku-30 ​​walo mthetho;
23 (18) _ "Umuthi wensangu ongumuthi" usho noma iyiphi into eyakhiwe, ukwenziwa, usawoti,
24 okususwayo, ingxube, noma ukulungiswa kwanoma iyiphi ingxenye yesitshalo Cannabis sp., Imbewu yayo
25 noma i-resin yayo; noma yiluphi uhlobo, ingxube, noma ukulungiswa okuqukethe
Ubungako balezi zinto lapho kutshalwa, kuvunwa, kusetshenzwe, kukhiqizwa,
27 kuhanjiswa, kusatshalaliswa, kusatshalaliswa, kuthengiswa, kunabasebenzi, noma kusetshenziswe ngokuhambisana
IKHophi ELINGAZIMI 20 RS HB 136 / GA Ikhasi 4 kwangu-118 HB013610.100 - UKwagunyazwa Kokomthetho Kwe-Cannabis Yezokwelapha
1 Izigaba 1 kuya ku-30 ​​zalo mthetho;
2 (19) “Omncane” kusho umuntu ongaphansi kweminyaka eyishumi nesishiyagalombili (18);
3 (20) “Usokhemisi” kusho okufanayo naku-KRS 315.010;
4 (21) “Udokotela” kusho udokotela onegunya lokunquma ukuthi ulawulwe yini
Izinto ezi-5 ngaphansi kwe-KRS 320.240, noma umhlengikazi osezingeni eliphakeme obhalisile ong
I-6 egunyazwe ukunquma izinto ezilawulwayo ngaphansi kwe-KRS 314.042, ngubani
7 egunyazwe yibhodi yelayisense yombuso ukuhlinzeka izitifiketi ezibhaliwe ngokulandela
Isigaba 8 salo Mthetho; 5 (9) “Iprosesa” kusho ibhizinisi elinelayisensi ngaphansi kwalesi sahluko elithola isitshalo esingavuthiwe
Izinto ezi-10 ezivela kumlimi ukuze zilungiselele, zinciphise, zisebenzise, ​​zixube,
Khiqiza, noma uguqule okunye kokuqukethwe kwesitshalo okunguhlaza, nemikhiqizo yephakeji
Okuqukethe okungu-12 okuqukethe noma okususelwa kokuthile okuluhlaza okwakuthengiselwa kwabanamalayisense
Umtholampilo we-13; (14) “I-processor processor” kushiwo umphathi oyinhloko, ilungu lebhodi, umsebenzi,
Amavolontiya ayi-15, noma i-ejenti yeprosesa;
16 (24) “Umkhiqizi” kusho ibhizinisi elinelayisensi ngaphansi kwalesi sahluko elivunyelwe
Basebenze futhi bahlanganyele emisebenzini evunyelwe yomlimi futhi
Iprosesa eyi-18; 19 (25) "Umenzeli womkhiqizi" kusho umphathi oyinhloko, ilungu lebhodi, umsebenzi, ivolontiya,
20 noma umenzeli womkhiqizi;
21 (26) "Isiguli esifanelekayo" kusho umuntu othole isitifiketi esibhaliwe kusuka
22 udokotela onobudlelwano obumele kanye nobungcweti bomuntu uqobo;
24 (27) "Isimo sezempilo esifanelekile" kusho isifo noma isimo sezokwelapha lokho
I-25 ivela ohlwini lwezimo zezokwelapha ezingafanele udokotela angasebenza kuzo
26 hlinzeka isiguli isitifiketi esibhaliwe esivunyelwe ngumnyango
27 ngokulandela iZigaba 3 no-28 zalo mthetho nangokuhambisana nokuphatha
Ikhophi engadingekile 20 RS HB 136 / GA Ikhasi 5 kwangu-118 HB013610.100 - 366 - XXXX GA
1 imithethonqubo emenyezelwe lapho;
2 (28) "Okutshalwayo okuluhlaza" kusho ingxenye embozwe ngethrikhi yesitshalo sowesifazane
3 I-Cannabis sp. noma noma iyiphi ingxube yamaqabunga ahlanganisiwe, isiqu, imbewu nezimbali ze
I-Cannabis sp. isitshalo 4 (5) “ikhadi lokuhlonza iRegistry” lisho umqulu okhishwe umnyango othi
I-6 ikhomba umuntu njengesiguli esifanele, esivakashela isiguli esifanelekayo, noma oqokiwe
Umnakekeli ongu-7; 8 (30) "Isiguli esifanelekile esibhalisiwe" kusho isiguli esifanelekile esifake isicelo,
Kutholwe abangu-9, futhi benekhadi lokuzazisa elivumelekile noma lesikhashana
Amarisidi alayisense ali-10 akhishwe ngumnyango;
11 (31) “Isikhungo sokuthobela ukuphepha” sisho ibhizinisi elinelayisensi ngaphansi kwalesi sahluko ukuthi
I-12 inikeza okungenani eyodwa (1) yezinsizakalo ezilandelayo:
13 (a) Ukuhlola i-cannabis yokwelapha ekhiqizwe ibhizinisi le-cannabis elinelayisense ngaphansi
14 lesi sahluko; noma (b) abanikazi bamakhadi okuqeqesha nabamele amabhizinisi e-cannabis;
(16) "Umenzeli wokugcinwa kwemithetho yokuphepha" kusho umphathi oyinhloko, ilungu lebhodi,
Umsebenzi, ivolontiya, noma umenzeli wesikhungo sokulandela ukuphepha;
18 (33) “Isithombo” kusho isitshalo se-cannabis esingenazimbali futhi side kuneziyisishiyagalombili
Amasentimitha ayi-19 (8); (20) “Ukubhema” kusho ukuphefumula intuthu ekhishwe emlilweni ongavuthiwe
Izinto zokutshala ezingama-21 lapho zikhanyiswa ilangabi; 22 (35) “Ibhodi lamalayisense ombuso” lisho noma yikuphi okulandelayo:
23 (a) Ibhodi Lokwelayisense Yezokwelapha i-Kentucky; kanye (b) neBhodi yaseKentucky Yabahlengikazi;
25 (36) "Ukusetshenziswa kwensangu yokwelapha" noma "ukusetshenziswa kwensangu okwelapha" kufaka phakathi i-
Ukutholwa, ukuphatha, ukuphatha, ukudlulisa, ukuthutha, noma ukusetshenziswa
I-27 ye-cannabis yokwelapha noma isesekeli okwelapha ngumnikazi wekhadi ngaphakathi
Ikhophi engadingekile 20 RS HB 136 / GA Ikhasi 6 kwangu-118 HB013610.100 - 366 - XXXX GA
1 ngokuhambisana nezigaba 1 kuya ku-30 ​​zalo Mthetho. Amagama athi “ukusetshenziswa kwezokwelapha
2 insangu "kanye" nokusetshenziswa komuthi insangu "akufaki:
3 (a) Ukulinywa kwensangu ngumnikazi wamakhadi; noma 4 (b) Ukusetshenziswa noma ukusetshenziswa kwensangu ngokubhema;
5 (37) “Isiguli esifanele ukuvakasha” kusho umuntu obhalise kanjalo
6 umnyango njengoba kudingeka ngaphansi kwalesi sahluko noma ophethe irejista evumelekile
Ikhadi lokuhlonza eli-7, noma idokhumenti efanayo, ekhishwe ngokulandela i
Imithetho engu-8 yelinye izwe, isifunda, insimu, i-Commonwealth, ukutholakala kwe-ins
I-United States, noma izwe eliqashelwa yi-United States elivumela umuntu lowo
10 ukusebenzisa i-cannabis yokwelapha emandleni okukhishwa; futhi
11 (38) “Isitifiketi esibhaliwe” kusho idokhumenti ebhalwe usuku yasayinwa ngudokotela,
12 lokho: 13 (a) Kusho ukuthi ngokombono wobungoti besisebenzi isiguli esingasithola
14 usizo lokwelapha noma lokuhlukumezeka ngokusetshenziswa kwe-cannabis yokwelapha;
(B) Icacisa isimo sezempilo esifanelekile noma izimo
Udokotela ongu-16 ukholelwa ukuthi isiguli singathola ukwelashwa noma ukwelapha
17 inzuzo; futhi (c) Iqinisekisa ukuthi udokotela uneziguli ezisebenzayo
19 ubudlelwano nesiguli
* UTom Howard at I-CannabisIndustryLawyer.com
* I-Miggy at Izindaba ze-Canannis Legalization
Unentshisekelo yokuza njengesivakashi? Thumela i-imeyili umkhiqizi wethu ku lauryn@cannabislegalizaitonnews.com.
Ilayisense yeNew York Cannabis Microbusiness
by Ivette | UJan 15, 2021 | Ukukhangisa
Amalayisense we-New York Cannabis Microbusiness License Cannabis microbusiness abonakala eyindlela entsha emazweni lapho elawula izinhlelo zawo zensangu ezisetshenziswa ngabantu abadala. Ilayisensi yebhizinisi elincane laseNew York lithuba labaninimabhizinisi abancane lokuba nethuba embonini ...
Ilayisense Yokulima Insangu eNew York
Ilayisense Yokulima Insangu eNew York Ilayisensi Yokulima Insangu yaseNew York ingenye yezinhlobo eziyishumi zamalayisense afakwe emthethweni omusha ohlongozwayo. Lona kungaba unyaka wokugunyazwa kwensangu eNew York. NgoJanuwari 6, uBill S854 wethulwe kwi ...